Iinkqubo zokuhlala. Ziyintoni, ziyintoni kwaye zingakhubaza njani iinkqubo zememori yokuhlala. | Iindaba zeGajethi
ENgokufutshane ndifuna ukuqala uthotho lwamanqaku ukuphucula ukhuseleko lweekhompyuter zethu. Kula manqaku siza kubona indlela yokufaka ii-antispyware ezahlukeneyo (i-antiSpyware) ezinje UkuKhangela kweSpybot kunye nokutshabalalisa okanye Intengiso kwaye kubalulekile ukuba uyazi ukuba yinkqubo yokuhlala ukuze kamva siphephe iintloko xa siqala ukuthetha ngazo kula manqaku.
Yintoni inkqubo yokuhlala?
Inkqubo yomhlali yinkqubo ehlala kwimemori yekhompyuter, yiyo loo nto sithetha ngeenkqubo zokuhlala kwimemori. Nasiphi na isicelo osisebenzisa kwikhompyuter yakho (umdlalo, i-p2p, umhleli wemifanekiso, igama, njl.njl.) Inenani elithile lememori kodwa xa uvale inkqubo imemori iyakhululwa kwaye inokusetyenziselwa enye injongo. Iinkqubo zokuhlala zihlala kwimemori ngalo lonke ixesha, nokuba awusebenzisi ngelo xesha, kwaye ngenxa yoko zihlala isigxina sememori yekhompyuter yakho.
PUkwenza icace gca, masithi umzekelo xa uyeka ukudlala omnye wemidlalo yakho uyikhulula ngokupheleleyo imemori kodwa ukuba usebenzisa i-antivirus ukuhlalutya ifayile, emva kokuyihlalutya i-antivirus ihlala kwimemori ekhusela ikhompyuter yakho.
Zithini iinkqubo zememori yokuhlala?
Ngalo lonke ixesha uvula ikhompyuter, iinkqubo ezihlala kwimemori, ezinjenge-antivirus, zilayishwa kunye nenkqubo yokusebenza ukuze ezi nkqubo zifumaneke ukusuka kumzuzu wokuqala. Kwimeko ye-antivirus, oku kuvumela inkqubo ukuba ikhuselwe ukusukela ngexa ikhompyuter iqala ngaphandle kokuvula i-antivirus ngalo lonke ixesha uvula ikhompyuter.
CNjengoko ubona, kulungile ukuba iinkqubo ezinjenge-antivirus ziqala ngokuzenzekelayo xa uvula ikhompyuter kwaye zihlala kwimemori ukuvumela ukusetyenziswa okuqhubekayo. Ezinye iinkqubo ezihlala kwimemori zenzelwe ukukhawulezisa ukulayishwa kwesicelo, umzekelo inkqubo Isifundi seAcrobat, esetyenziselwa ukuvula iifayile zePDF, ngokuyinxenye ihlala kwimemori elinde wena ukuba ufuna ukuvula ifayile yePDF, ngale ndlela xa uvula enye yezi fayile inkqubo sele ilayishwe ngokungaphelelanga kwaye umthwalo wenziwe ngokukhawuleza okukhulu (ukuba kuyenzeka ufuna indawo yeAcrobat Reader cinga ngayo I-Foxit PDF).
PKwelinye icala, inokwenzeka ukuba unenkqubo ezininzi ezifakwe kwikhompyuter yakho, into eqhelekileyo, kwaye uninzi lweenkqubo zifuna ukulayishwa ngokuyinxenye kwisiqalo ukuze zifumaneke ngokukhawuleza, oku kuthetha ukuba ukuqala kwekhompyuter kucotha ezantsi kakhulu (enye yeengxaki zekhompyuter ecothayo yile) kwaye zonke ezi zinto Iinkqubo zabahlali kwimemori kudla inxalenye enkulu yememori ekhoyo kwinkqubo. Ke ngoko, oko ekuqaleni kunokubonakala ngathi izibonelelo ziphela zingabinakuphikiswa okoko ikhompyuter icotha, ukusetyenziswa kwe ICPU ngokungeyomfuneko kwaye eyokugqibela inokukhokelela kufudumezo olugqithisileyo lweprosesa (ngakumbi ehlotyeni).
PKuyinyani, ukuba ujonga kwikona esekunene yedesktop yakho (kwiWindows XP) uza kubona ii-icon ezininzi, nganye kuzo imele inkqubo eqale ekuqaleni kwaye ihlala imemori ihlala khona. Sele sitshilo ukuba ezinye zibalulekile njenge-antivirus kodwa ezinye zisebenzisa kuphela izixhobo ngokungeyomfuneko. Umzekelo masithi uyayifaka Winamp Kuba ngeempelaveki uyathanda ukumamela umculo kunye nekhompyuter yakho, kodwa evekini usebenza nekhompyuter yakho kwaye awuyisebenzisi, xa ufaka iWinamp ihlala iqala kunye nekhompyuter ukuze ihlale kwimemori ixesha elide njengoko ikhompyuter yakho ilinde ukuba usebenzise umdlali, kodwa uyisebenzisa kuphela ngeempelaveki ukuze Kutheni le nkqubo uyigcina kwimemori ukuba awuyi kuyisebenzisa?. Kwelinye icala, nokuba usebenzisa inkqubo yonke imihla, umahluko phakathi kokuyiqala ekuqaleni ukuyiqala kwimemori incinci kwaye ngalo lonke ixesha awusebenzisi umdlali uya kuthatha izixhobo. Ngaba ngekhe kubengcono ukukhusela inkqubo ukuqala xa i-PC iqala kwaye kuyikhusela ekuhlaleni kwimemori?.
Ungayithintela njani inkqubo ekulayisheni kwimemori kwakamsinya nje ukuba ikhompyuter iqale
PUkuthintela inkqubo ukuba ingalayishi kwimemori kwaye iqale ngenkqubo yokusebenza sineendlela ezininzi kodwa siza kubona inye kuphela elula kum.
1) Yiya kwimenyu "Yokuqala" kwaye ucofe ku "Run":
2) Ifestile ebizwa ngokuba yi "Run" iya kuvula, ekufuneka uchwetheze kuyo "Msconfig" (ngaphandle kwezicatshulwa). Emva koko ucofe ku "Yamkela".
3) Iwindow «Ukusetyenziswa kwenkqubo» iya kuvula, cofa kwithebhu yokugqibela engentla, apho ithi «Qala».
4) Ngoku ungazibona zonke iinkqubo ezilayishayo xa uvula ikhompyuter yakho.
5) Ukuthintela nayiphi na ekulayisheni kufuneka ungakhangeli ibhokisi ehambelana nayo. Ukuthintela iWinamp ekulayisheni, umzekelo, sukukhangela ibhokisi ebonakala ecaleni kwe "winampa" ehambelana ne "winamp agent" inkqubo yeWinamp elayishwe kuqaliso.
6) Nje ukuba singakhange siqwalasele zonke iibhokisi ezihambelana neenkqubo esingafuni ukuzilayisha ekuqaleni, kufuneka ucofe ku «Faka isicelo» emva koko ku «Vala». Kubalulekile ukuba ungaqali ukungakhangeli iibhokisi ezinje ngobuqhetseba kwaye ungaqwalaseli kuphela abo ubaziyo bahambelana neenkqubo ofuna ukuzisusa kwasekuqaleni. Emva kokucofa ku «Vala» le festile izakuvela apho kufuneka ukhethe phakathi kokuqalisa kwakhona inkqubo ngoku okanye kamva.
BEwe, kuphelele apho, xa uqala ikhompyuter yakho, iwindow iya kubonakala ikwazisa ukuba isixhobo sokucwangciswa kwenkqubo sisetyenzisiwe, jonga ibhokisi ukuze ingaphinde iboniswe kuwe kwaye uvale iwindow. Iinkqubo ozikhethileyo azisayi kulayishwa, oko akuthethi ukuba uzikhuphile, ubathintele ukuba bangaqali kunye nenkqubo yokusebenza kunye nokusebenzisa izixhobo. Khumbula ukuba kukho iinkqubo zokuhlala ezifana ne-antivirus kunye nezinye zenkqubo yokusebenza ongafanele uyikhubaze. Ngayo nayiphi na imibuzo sebenzisa amagqabantshintshi. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iinkqubo zokuhlala. Ziyintoni, ziyintoni kwaye zingakhubaza njani iinkqubo zememori yokuhlala.
Hola Alfredo ndiyavuya ulapha kwaye uyalithanda iphepha. Enkosi kakhulu ngengcaciso yakho nangemibuliso yakho kunye notyelelo oluninzi oluvela kwilizwe lakho.
Kutheni le nkqubo uyigcina kwimemori ukuba awuyi kuyisebenzisa? Ngaba ungawuphendula loo mbuzo
Ndifunda lukhulu kwezimvo zakho namhlanje, nge-19 kaSeptemba 2007 ndilifumene iphepha lakho, bekushiyeke iiyure ezi-4 kwaye andidinwa kukufunda zonke izimvo zakho ezibaluleke kakhulu nezinomdla, ezifundeka lula nezenziwe ngomlomo. enkosi kwaye ndiyabulela ngemfundiso yakho.
UAlfredo (Arequipa - Peru - Umzantsi Melika)
Molo Alfredo, umbuzo ungathanda ukwazi ukuba leliphi icandelo okanye icandelo lememori apho i-antivirus ikhoyo.
Okunye kulapho kanye ikhoyo i-com command kwaye ukuba ungafikelela kweli candelo ewe okanye hayi kwaye kutheni, enkosi, ndiyathemba ukuba uya kundiphendula apha kunye ne-imeyile yam ukuba ayongxaki, kwaye enkosi kakhulu
Enkosi ngokundinceda ngenkqubo encinci ebindenza ibugging ekuqaleni kweewindows
Wamkelekile peter Kuqhelekile ukufumana iinkqubo ezicaphukisayo ezifakwe ekuqaleni kweWindows kwaye ungasishiyi sodwa. Ukubulisa.
Ewe, ixesha lokuqala endingene ngalo kweli phepha kwaye kwenzeka ngamabona-ndenzile kwaye indikhonze ngokwenyani; kuba bendinokuthandabuza okuninzi malunga nesayensi yekhompyuter! Enkosi
Khathalela ... Ndiyabulisa
ps khange bandincede kwinto endifuna ukuyazi
akukhange kubekho nto ithi ndinamathandabuzo
Yonke into ibonakele kum ngaphandle kwale bendiyifuna
Ndifuna ukwazi ukuba zeziphi iinkqubo zokubonisana
Njengoko i-encarta, isichazi-magama, njl.
Kungenxa yokuba esikolweni bandinike umsebenzi wesikolo ukuba ndijonge loo nto
Ndiyazi ukuba zezantoni kodwa bendifuna ukuba nolwazi oluntsonkothileyo kwaye andikalufumani
Enkosi ngoncedo lwakho!!
Wamkelekile uMariana, yima ngebhlog amaxesha ngamaxesha kwaye ubone ukuba amathandabuzo akho asonjululwe na. Umbuliso.
Enkosi kakhulu ngale nkcazo. Ndingathanda nokwazi ukuba i-outlook expression ihleli kwaye inokususwa kuqwalaselo lwesiqalo, kuba ndisebenzisa ezinye iinkqubo. Kananjalo ndingazifumana njani iifolda apho kugcinwa khona isikrini kunye nemvelaphi yedesktop.
Ndiyabulela kakhulu kwiphepha kunye noncedo.
Luis ukuba ndiyayazi imbonakalo yokubonisa ayiqali xa ikhompyuter iqala, kuya kufuneka uyenze ngesandla.
Ifolda iya kuxhomekeka kwindawo okhethe ukuyikhuphela, ngokungagqibekanga ihlala amaXwebhu am. Zama ukubona. Ukubulisa.
Enkosi ngolwazi kwiinkqubo zabahlali. Imibuliso, uNacho.
molo iviniga: akuthandabuzeki ukuba ulumke kakhulu ukucacisa ukuba bendisoloko ndinomnqweno wokuba nescreen sokuhambisa isikrini kwaye enkosi kuwe, sele ndinayo. Imibuliso evela eMexico. qhubeka uqhubeke usifundisa.
UDani isitshixo obuza ngaso kukuba Shift (oonobumba abakhulu), enye enotolo, hayi oonobumba abakhulu. Ukuba uyigcina icinezelwe ngexesha lokuqalisa kweWindows, iinkqubo ezibanjelwe kwisiQalo aziyi kulayishwa. Konke okugqibelele.
Fer lopez sitsho
Kwinto encinci endikhe ndayifunda kule ndawo, ndibone ukungakhathali okuninzi kunye nokuchaneka kulwazi abalunikezelayo.
Ndonwabile ukudibana nabo «sele bezintandokazi zam»
Phendula kuFer Lopez
Andifumani nto iyimfuneko
Molo, lixesha lokuqala endwendwela iphepha lakho kwaye ndonwabile ngayo yonke into endiyifumanayo apho; Alithandabuzeki elokuba sele ukwiphepha lam endilithandayo.
Sala kakuhle …… .nethamsanqa.
Molo, hee, oku kwandinceda ukuba ndiqonde umsebenzi wam wesikolo kakhulu, kulungile ukuba wenze olu hlobo lophando
Nyhani..this yandinceda kakhulu!
Ngena kwaye kwabonakala inkcazo elungileyo kakhulu kunye nolwazi.
Enkosi ngoncedo lwakho! Ndingathanda ukwazi okungakumbi! usale kakuhle !!
Ndingenza njani ukuze ndigqibezele inkqubo efakiweyo kodwa engabonakali kuluhlu lweenkqubo ezifakiweyo kwaye ndizamile ukuyifumana kodwa andiyifumani
Hanna almanza sitsho
Phendula uHanna Almanza
Ezi ngcebiso ziluncedo kakhulu kum ukukhawulezisa imemori yekhompyuter yam yakudala kancinane
izifundo zilungile kakhulu kwaye zilula …… kwaye ndinombuzo wokuba yeyiphi i-antivirus engcono kwaye indixelela ntoni nge-kasperky, kwaye ukuba unezitshixo zoku… nceda enkosi
ndicela undinike idilesi apho ndingazikhuphela khona izitshixo ezivela kwikaspersky
lixesha le1 ukuba ndingene kwaye guzto kuidate
Enkosi ngolwazi lwakho ukuqala iinkqubo zomhlali. Ngexesha elifanelekileyo.
intonga encinci sitsho
Enkosi kakhulu ngolwazi! Ebendiphakela kamnandi kwaye bendimdinga for i-practical yomsebenzi esikolweni. Enkosi kwakhona
hayi, olu lwazi lundincede kakhulu
inkukhu yejhon sitsho
Enkosi kakhulu ngokuchazwe kakuhle, iposti ebalaseleyo
Phendula jhon pollo
Inyani kwaye ayikokunika coba, kukuba izithuba ezingaphezulu ezinje ngezi zakho ziyafuneka ezichaza izinto kubantu abangenamava ngendlela elula necacileyo.
Ndingathanda ukubuza ukuba zeziphi iinkqubo zabahlali ekufuneka zibalulekile xa uqala i-pc, ngaphandle kwento ye-antivirus? Ndiyabulela kakhulu .
emm, akukho. sitsho
Eli phepha lihle kakhulu ... linayo yonke into oyifunayo !!!
ithamsanqa ukubona! ...
Phendula kwi-emm, noc.
Molo, le yinto ebendisoloko ndifuna ukuyenza kodwa kude kube namhlanje ndiyayiqonda indlela yokwenza, nangona inkqubo yam yokusebenza ingeyiyo i-XP kodwa iVista, ndiza kubona ukuba ndingayenza na. Enkosi.
Enkosi kakhulu, bendirhalela ukufaka i-Sims 2 kwaye bendingenayo imemori ngenxa yeenkqubo zabahlali !!
Ngendlela oyichaza ngayo kakuhle
* Uyichaza kakuhle, yenza nokuba ikati yesayensi yekhompyuter njengam ifumanise ngaphandle kweengxaki !! Enkosi kwakhona!!